बा भन्नुहुन्छ « गोर्खा आवाज
प्रशस्त प्रकाश छिर्ने फराकिलो कोठा वरिपरि पूर्वीय र पाश्चात्य साहित्य र दर्शनका किताबहरुको चाङ अगाडि पुरानो मोडलको होचो टेबुल र टेबुलको पछाडि बा बसिरहनु भएको थियो। उसो त बाले मलाई धेरै माया गर्नुहुन्छ तैपनि उहाँको हक्की स्वभावले म बासङ्ग डराउछु। अभिभावकत्वमा अलिकति डर जरुरत हुन्छ नै मलाई असामान्य लाग्दैन। अगाडि दुईवटा प्लेट, प्लेटमा केही स्याउका टुक्राहरु र बडो गजबले उसिनिएको तरुल साथमा मरिच हालेर पकाएको एक एक कप चिया। म बसेँ । स्याउका टुक्राहरु मुखमा हाल्दै वरै रहेको डा. तुलशी भट्टराईकृत नियात्रा संग्रह हेर्दै थिएँ। बाबा भने मोबाइलका स्क्रिनमा केही हेरिरहनुभएको थियो । म भने किताबका पेजहरुमा अलमल्लिरहेकी थिएँ। एक्कासि बाबाको मुखबाट निस्कियो “रन्जु दर्शनाले रविन्द्र मिश्रलाई हातपात गरेको आरोप लगाइन् रे” मेरो दिमागमा जोरसँग झट्का लाग्यो। कुनै कुराले जब मेरो दिमाग छुन्छ, म केही बोल्न सक्दिन जब दिल छुन्छ म बोलेर थाक्दिन।
किताबबाट हटेर मेरा आँखाले बालाई हेर्न थाले। के के सुन्नुपर्छ है। केही बेरको मौनता पछि म बोलेँ बाबा मैले आजसम्म हजुरलाई यस्ता विषयका कुनै जिज्ञासा राखेको पनि छैन र राख्न पनि चाहान्नथेँ । तर आज सोधिरहेको छु। आखिर यो सब के हो बाबा ? के यी सब सत्य हुन ? के सबै पुरुषहरु यहि बलात्कारी मानसिकताबाट ग्रसित हुन्छन ? के नारीहरु पुरातन समाजले व्याख्या गरेजस्तै गरी हेपिएका हुन? यो सब के हो बाबा ? एक्कासी बाका अगाडी मेरा सबै आक्रोश र प्रश्नहरु थुप्रीए।
तत्कालीन विवेकशील र साझा पार्टी मिलेर एउटै पार्टी विवेकशील साझा पार्टी बनेपछि पार्टीमा संयोजक रविन्द्र मिश्रले गरेका व्यवहारको पोल युवा नेतृ रञ्जु दर्शनाले खोलेकी छन् ।
बाले कप उठाएर सुरुप्प चिया पिउनुभो। मेरो अनुहारमा हेर्नुभो र भन्नुभो यो सबै जे भैरहेको छ यसको दोषी एकादुइ घटना बाहेक दुवै पक्ष जिम्मेवार हुन्छ। मन यस्तो चिज हो जो मागिरहन्छ त्यसलाई चेतनाले नियन्त्रण गर्नुपर्दछ। जब चेतनाले मनलाई नियन्त्रण गर्दैन तब मनले यसका विकृत स्वरुप देखाउन सुरु गर्छ। पछिल्ला समयमा भएका अधिकांश घटना हेर्ने हो भने केटा या केटी भनौँ नारीपुरुष एक अर्कामा विभिन्न कारणले नजिकिन्छन् । ती मध्ये भौतिक वा शारीरिक सुख प्राप्ती,कुनै घटना परिघटना पनि पर्दछ। यसरी नजिकिने क्रममा psychological distance र social distance कम हुँदै जान्छ। परिणामस्वरूप दुवै पक्षको मनोवैज्ञानिक सहमति या एक पक्षमा केही बढी शक्तिको अवस्था सिर्जना हुन जान्छ। दुवै पक्षको मनोवैज्ञानिक सहमति भएको अवस्थामा यस्ता घटनाहरु घट्न सक्छन। तत्कालको लागि हानिकारक नभएपनि दीर्घकालमा एक न एक पक्षलाई यसले हानी पुर्याउँछ नै। जब चाहेको अपेक्षित सुख या भौतिक वस्तु मिल्दैन त्यतिबेला मानिसको मन शक्तिशाली हुन्छ त चेतनाशक्ती कमजोर। तसर्थ घटना घटेको लामो समयपछि मात्रै पोल खुल्छ खास गरेर दोस्रो पक्षसँग प्रतिसोध लिने उद्यस्यले।
अर्को छ शक्तिशाली र कम शक्तिशाली पक्ष। जसमा एउटा पक्ष अर्को भन्दा ज्यादा शक्तिशाली हुने भएकाले विभिन्न प्रलोभन देखाएर, फकाएर, घुर्क्याएर धम्की दिएर या इमोसनल ब्ल्याकमेल गरेर अर्को पक्षबाट सन्तुष्टीको चाहना राख्छ। यसरी भएका घटनामा कुन पक्षलाई दोषी मान्ने भन त!
पछिल्लो समयमा यस्ता थुप्रै घटनाहरू घटिरहेका छन्। निर्मला पन्त, माया बिक जस्ता अबोध चेलीहरु यस मनोवृत्तिका सिकार भएका छन भने अझै कति यस्ता घटनाहरु दमित अवस्थामा रहेका छन। पछिल्लो समय हत्या, हिंसा, मानव बेचविखन, बलात्कार आत्महत्या जस्ता अपराधजन्य घटना विगतमाभन्दा बढि सार्वजनिक हुन थालेका छन् ।
अमेरिकाको लस भेगसको प्रहरीले बलात्कारको आरोप लागेका पोर्चुगलका चर्चित फुटबल खेलाडी क्रिस्टियानो रोनाल्डोसँग उनको डीएनएको नमुना मागेको थियो। सिरहामा जन्मदिनको पार्टी दिने बहानामा बोलाएर लहान नगरपालिका–११ स्थित भोटियाटोलको फूलबारीमा दुई युवती सामूहिक बलात्कारको सिकार भए।बालिकादेखि उत्तरवयस्क महिलासमेत बलात्कृत भएका समाचारले दिनहुँजसो सञ्चार माध्यम भरिएका छन् । जति समाचार आएका छन्, तीमध्ये आधाभन्दा बढीले त इज्जत र प्रतिष्ठामा आँच आउने कारणले बलात्कृत भएको घटना नै लुकाएका हुन्छन् ।
गत वर्ष अपहरणपछि सामूहिक बलात्कारमा परेकी एउटी भारतीय किशोरीले आफ्ना बाबुआमाले पीडकहरूबाट पैसा लिएर आफूलाई बयान फेर्न दबाब दिएको आरोप लगाएकी थिइन्।
अमेरिकाको फ्लोरिडाका यस्तै आरोप लगाई बलात्कारको दोषी ठहर्याउदै मृत्युदण्ड दिइएका चारजना ७० वर्षपछि मरणोपरान्त निर्दोष साबित भए।
तसर्थ यस्ता घटनाहरुको पछाडि ठूलो रहस्य लुकेको हुन्छ।
फ्रायडको मनोवैज्ञानिक दर्शनसँग पनि नजिकैबाट परिचित छौ। पूर्वीय दर्शन पनि पढ्नु त्यहाबाट तिमिले जिज्ञासा राखेका यी सबै सवालहरुको जवाफ भेट्ने छौ।
छोरी ! महिलाहरु नहेपिएका होइनन्। केही महिलाहरु हेपिएका छन बाँकी स्वतन्त्र छन र ती केहीसङ्ग तुलना गरेर आफ्नो भाग खोजिरहेका छन्। सबै पुरुष खराब हुँदैनन् र सबै नारी असल हुँदैनन। अक्सर यहीँ बिचबाट यस्ता घटना घट्छन भने घटनाका केही समयपछि मात्रै प्रकाशमा आउछन। र यस्तै अफ्ट्यारो अवस्थामा आउछन। नेपालीमा एउटा उखान छ जहाँ पातलो त्यहाँ छिंड जसको अर्थ हुन्छ कमजोर ठाउमा नै झन कमजोर बनिदिन्छ। त्यो पनि घटना पनि त्यस्तै हुन सक्छ ।